Qolkii Kaniisada ee Jaaliyada iyo Qashinkii Jwxo-shiil oo Jugta Iskuhaysa – Rasaasa News
Mar 4, 2010 badal, Jwxo-shiil, kaniisadii, qolkii
“Naa Sudhaneey Culimaa Caawa reerka joogtee Saandoofaarkii u soo gogol ha ku dukadaane, oo dhiilka saala doofaarka ku soo uumi, soona qaad Suunkii Ayga ee saca lagu dabrayey, oo ku soo daa Sicii Xaysino ahaa ee Agoonta Shariifeed laga soo dhacay.”
Erayadaasi kolkii ay afkiisa ka sii dhamaanayeen culimadii reerka martida u ahayd kabihii bay hoosta ka gashadeen iyaga oo Bisinka hoosta ka boobaya.
Waxaan filayaa kolka aad maqashaan qolkii Kaniisada ee Jaaliyada in aad yaabaysaan, oo aad odhanaysaan maxay ahaayeen dadka qol Kaniisad ku yaal naf ka dayey!
Warar aanu ka helayno dalka Ingriiska ayaa waxay sheegayaa in Jahliyadii qolka Kaniisada ee kooxda Jwxo-shiil ay fooda iskula jirto. Sida ay culimadii martida ahayd u diideen in ay caano ka dhamaan reerka aan kor ku soo sheegnay ayey Jahliyadii qolka Kaniisada ee Jwxo-shiil looga wada cararay kolkii ay wayday cid u soo xaadirtan iyagii ayaa isku dhex laynaya.
Jahliyada Jwxo-shiil, ayaa great Britain waxay kaga jirtay qol labo mitir ah oo kaniisad ku dhexyaal. Kolka ay doonayaan in ay shir qabtaan buundhi Jaaliyad Hindi leedahay oo South hall ku yaal ayey isugu mid midaari jireen. Muddo hal sano ah dadweynihii waxay fahmeen in meesha munaafadu ka socoto ay tahay qolka Kaniisada wayna joojiyeen in ay xidhiidh la sameeyaan.
Kolkii ugu dambaysay waxaa qolka Kaniisada joogay Tamuujo, waa nin baa la yidhi gudoomiye u ahaa Jaaliyada qolka Kaniisada xiliyadii ugu dambaysay, waxna aan isagu reeban bulshada dhaxdeeda. Kolkii ay waxba u kala socon waayeen Tamuujo, ayuu kooxda Jwxo-shiil u sheegay in uusan sii joogayn Kaniisada uuna ku cibaado seegay.
Kooxda Jwxo-shiil, oo aan iyadu marna waayin dad indho xidhan amaba buufis wareeriyey, ayaa waxay u sheegtay kuwaas in la doorandoono dadkii hogaamin lahaa qolka Kaniisada.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa u sharaxan Qolka Kaniisada nin la yidhaahdo Cismaan Babadal oo wakiil uga ah Kaalinka 5aad kooxda Jwxo-shiil ee dalka Ingriiska iyo gabadh la yidhaahdo Ruqiya oo reer Xamar ah iyo Wiil isagu Sujuu ah oo anaan wali magaciisa helin.
Waxayna u kala safan yihiin baa la lee yahay saddex koox oo kala ah Cabdile yar oo wata Ruqiya iyo Kaalinka 5aad oo wata Cismaan iyo wiilka Sujuuga ah oo ay wataan dad Sujuu ah oo taageera Jwxo-shiil [daanyeer dabadiisa guduudan ma arko ee daanyeerka kale dabadiisuu arkaa], bal sujuu maxaa Jwxo-shiil ka galay iyagii baa kadeedane.
Isha ayeynu ku hayndoonaa ka u hadha Qolka Kaniisada iyo kooxda Jwxo-shiil. Mid kasta oo qaata qolka suurto gal marna uma noqondoonto in uu Jwxo-shiil ka faa,iidaysto.
Dawlad Degaanka Somalida oo ku Hawlan Helida Lafihii Dr. M S Dolal